Taageerayaasha Madoobe Nuunow oo dhigay debadbax ka dhan ah Jawaari iyo Kay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taageerayaasha Madoobe Nuunow oo dhigay debadbax ka dhan ah Jawaari iyo Kay
Mareeg.com:- Bannaanbax loog soo horjeedo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari iyo Madaxa Xafiiska Qaramada Midoobaye ee Soomaaliya danjire Nicholas Kay ayaa maanta ka dhacay xarunta ADC-da iyo buundada Abshir Kaahiye ee magaalada Baydhabo, iyadoo berri uu ka furmo doono Baydhabo shir lagu dhisayo maamul saddex gobol ka kooban.
Dadkii bannaanbaxan ka qaybgalayay ayaa lagu waday inay waddooyin ka mid ah kuwa magaalada socod ku maraan, balse waxaa loo hor-istaagay arrimo amniga ku saabsan, sida ay sheegeen mas’uuliyiin degmada.
Taageerayaasha maamul-gobaleedka lixda gobol ayaa ka bannaanbaxa ka qaybgalayay iyagoo isugu tagay xarunta ADC-da Baydhabo, halkaasoo ay kula hadleen mas’uuliyiinta maammulkaas.
Mas’uuliyiintan ayaa dhammaantood waxay xuseen in la qaadaco hadalladii kasoo baxay ergayga Qaramada Midoobay iyo fikrada uu wado guddoomiyha baarlamaanka Somalia, Maxamed Cusmaan Jawaari ee ku saabsan in la dhiso maamul saddex gobol ka kooban.
Gaba-gabadii bannaanbaxa ayaa waxaa dadkii ka qaybgalayay la hadlay ninka sheegta inuu yahay madaxweynaha maamulka 6-da gobol, Madoobe Nuunow oo u sheegey inaysan kala go’i karin gobalada koonfureed ee Soomaaliya, uuna diyaar u yahay inuu wadahadal la furo Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha maamulka Jubba, balse uusan hor-fariisn doonin maamulka saddexda gobol.
Nuunow ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu u tanaasulayo, Axmed Madoobe haddii aysan kala go’ayn lixda gobal, iyadoo dhammaadkii dibadbaxana lagu gubay goobta sawirka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Jawaari.
Dhinaca kale, maalinta berri ah ayaa la filayaa in la furo shirka lagu dhisayo maamul-goboleed saddex gobol ka kooban, kaasoo ka furmo doona gudaha magaalada Baydhabo, gaara ahaan xerada qaybta 60-aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobalka Baay.
Magaalada ayaa waxaa ka socda shir loogu hadlayo sidii loo mideyn lahaa maamullada Koonfur-galbeed ee horay looga dhisay Baydhabo, taasoo ay wadaan xildhibaannada kasoo jeeda deegaannadan.
Dhanka kale, Guddiga farsamada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu xil saran dhismaha maamul gobleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ka warbixiyay kulamo ay la qaateen hay’ado ka tirsan Qarammada Midoobay.
Wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Khaalid Cumar Cali oo ka tirsan guddiga ayaa sheegay inay kulammo la qaateen xubno ka socdey hay’adda Qarammada Midoobay u qaabilsan horumarinta barnaamijyada ee UNDP, ayna kala hadleen sidii ay u taageeri lahaayeen dhismaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasiirka ayaa tilmaamay in hay’adaha Qarammada Midoobay ay diyaar u yihiin inay dowladda gacan ku siiyaan dhismaha maamulka Koonfur Galbeed, Soomaaliya.
Khaalid Cumar ayaa intaas ku daray in dhawaan la qaban doono shirweyne lagu dhisayo maamulka KMG ah oo loo sameeyo gobollada ku midoobaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa u jeediyay dadka kasoo jeeda gobollada uu ka kooban yahay maamulka Koonfur Galbeed, Soomaaliya ee Baay, Bakool iyo Shabeellaha hoose inay gacan ku siyaan dowladda sidii looga shaqeyn lahaa dhismaha maamul loo dhan yahay.
← Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay diyaarad sawireysa maraakiibta ku kaluumeysta sharci darrada → Sri Lanka:Spoken like a diplomat